Conky မန်နေဂျာ - conky monitor များကိုထိန်းချုပ်ရန် Front-end | Linux မှ
Conky မန်နေဂျာ - conky monitor များကိုစီမံရန် Front-end
cr0t0 | | applications များ
အခါအားလျော်စွာငါအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ ubuntera က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရောက် မင်္ဂလာပါကနေလက်ရှိသတင်းပါရှိသည် GNU / Linux များ နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ် PPA စိတ်ဝင်စားဖို့ applications များနှင့်အတူ။ ငါဘယ်လိုနေလဲ မြဝတီ ငါမကြာသေးမီကငါ install လုပ်ပေမယ့်ငါ့အ repository ကိုထဲမှာ PPA ရဲ့ထည့်သွင်းဖို့မကြိုးစားပါ YAD y နောက်ဆက်တွဲစာသား ပြsiteနာမရှိဘဲဤ site ၏ PPA နှင့်အတူ။
ဒီကနေ့မှာငါဟာဘာသာစကားနဲ့ပရိုဂရမ်ကိုရေးထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ application တစ်ခုကိုတွေ့တယ် Vala ငါတို့ရဲ့ configurations တွေကိုဂရပ်ဖစ်စီမံနိုင်အောင်ငါမင်းတို့နဲ့မျှဝေချင်တယ်။
Conky မန်နေဂျာ v1.2 အဓိကပြတင်းပေါက်
မသိသောသူတို့အဘို့, ကတုံး desktop ပေါ်မှာ windows များစွာကိုခွင့်ပြုပေးတဲ့ light system monitor တစ်ခုဖြစ်သည် GNU / Linux များ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစား (windows widgets နှင့်ဆင်တူ) နှင့်အတူ။ သင့်တွင်မျက်နှာပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောမော်နီတာများတပ်ဆင်ထားနိုင်ပြီးစားသုံးမှုသည်သုညနီးပါးရှိသည်။
ubuntu တွင်အောက်ပါ command များကို console တွင်ထည့်နိုင်သည်
En debianမှန်ကန်သောဗိသုကာအတွက်ဖိုင်ကိုသင်ကူးယူရမည် Launchpadကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ 64-bit version ကို download လုပ်တယ်။ စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်နောက်အချက်တစ်ခုကငါတို့မှာရှိရင် debian wheezy ငါတို့ဌာနခွဲအတွက်အထုပ်ကို download လုပ်ပါ သေချာသော de Ubuntu ကို ထည့်သွင်း packages များနှင့်သဟဇာတသေချာစေရန်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့က install လုပ်ပါ
၎င်းကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် console ကိုရိုက်ထည့်သည်
Ubuntu ပေါ်မှာဗွီဒီယိုတစ်ခု run နေတယ်
ဖန်တီးသူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အကြောင်းအရာများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ဤအပလီကေးရှင်းအကြောင်းအနည်းငယ်ပိုသိနိုင်သည်။ TeeJee Tech မှ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Conky မန်နေဂျာ - conky monitor များကိုစီမံရန် Front-end
ArchLinux အတွက် yaourt-conky-manager ဖြစ်သည်
အတော်လေးအသုံးဝင်ကျေးဇူးတင်စကား !!!! နောက်ဆုံးတော့ငါကြောက်စိတ်သိပ်မရှိဘဲ conky ကိုစတင် configure လုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ file ကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ငါ hahaha ဘာလုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး
မည်သူမဆို Fedora တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသိပါသလား။
အဲဒါကိုဂြိုလ်သားနဲ့ပြောင်းပါ၊ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၀ ကနေသွားပါတယ်။
အံ့ acular ဖွယ်ရာအစီအစဉ်၊ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😉
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအစီအစဉ်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် the
အမှန်တရားကတော့ဒါဟာလူတွေအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိသည်၊ အချို့သောဆက်တင်များမှာအသေးစိတ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကောင်းပြီကသက်သေပြရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ မည်မျှ configure လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အချို့သောကွန်ပျူတာများ (cpu၊ screen resolution, temperature sensors စသည်တို့) အတွက်လာမည့်အခင်းအကျင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
configuration files များကိုပြုပြင်မွမ်းမံလိုသူများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် parameters များကိုပြောင်းလဲပါကမည်သို့ဖြစ်မည်ကိုကြည့်ရန်ဤဖိုင်များ၏လိုင်းများကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရေးခြင်းအားဖြင့်လေ့လာခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အရာအားလုံးကိုလုပ်ရန်ဤကဲ့သို့သော application တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်လည်းခက်ခဲလိမ့်မည်။ .conkyrc နှင့် tema-x.lua ဆက်တင်များကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမသိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်အလွန်ဖန်တီးမှု themes များရှိပါတယ်!
| thon ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောလူတို့၊ ငါ .deb နှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ အောက်ပါ package နှင့်ငါ့ကိုမှီခိုရန်ပြproblemနာရှိသည် - conky-manager သည် libglib2.0-0 (> = 2.35.9) ပေါ်တွင်မူတည်သည်; မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ:
system ပေါ်တွင် `libglib2.0-0: amd64 The ၏ version မှာ 2.33.12 + really2.32.4-5 ဖြစ်သည်။
thon ။ စာပြန်ရန်
netrunner အတွက်ဘယ်လို install ရမလဲ။
pdt: တိုက်ရိုက် link ကိုချသည်
PC အတွက် Instagram ကို download လုပ်ပါ
BlackBerry အတွက် Instagram ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ